राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई एनआरएनएको सहयोग « Janata Times
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई एनआरएनएको सहयोग
काठमाडौं, ८ असार । गैरआवासीय नेपाली संघले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । आज गैरआवासीय संघको सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रलाई १२ लाख ८७ हजार ५८० रुपैयाँको चेक हस्तान्तण गरेको हो । चेक गैरआवसीय नेपाली संघका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष डा. महावीर पुनलाई हस्तान्तण गर्नुभयो ।
संघका उपाध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले विश्वभरका नेपालीहरुले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । डा. महावीर पुनले संघले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गरेकोमा आभार प्रकट गर्नुभयो । विदेशबाट ९२ देखि ९४ प्रतिशत सामान नेपालमा आयात हुँदा धेरै रकम विदेशमा नै जाने भएकोले त्यसको ५ प्रतिशत मात्र नेपालमा उत्पादन गर्न सके देशको व्यापार घाटा कम हुने, देशको राजस्व वृद्धि हुने र रोजगारीको सिर्जना हुने बताउनुभयो ।
उहाँले यस्ता आविष्कार केन्द्र कुनै एक क्षेत्रमा मात्र नभई प्रदेशमा, पालिकामा नै खोलिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली संघले पनि आविस्कार केन्द्रको स्थापना गरी नयाँ प्रतिभावान व्यक्तिहरूलाई प्लाटफर्म दिन सक्ने जनायो । अध्यक्ष आचार्यले विभिन्न अभियन्ताहरुबाट प्रतिबद्धता गरिएको रकममध्ये संघको खातामा जम्मा भएको रकम हस्तान्तरण गरिएको जनाउनुभयो ।
त्यस्तै, विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप र लागानी नेपालमा हस्तान्तण गर्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्ता ठाउँहरू उपयुक्त रहेको ठहर गर्दै संघले पवित्र मन बोकेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई हरदम सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न मुलुकबाट आउनुभएका आइसिसि तथा एनसिसिका प्रतिनिधिहरु, गैरआवासीय नेपालीहरु लगायत संचारकर्मीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
एनआरएनए स्वास्थ्य सम्मेलनमा महावीर पुनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने
लन्डन, असार १३ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिको आयोजनामा आगामी सेप्टेम्बर दोस्रो
एमसीसीपछि रिसाएको चीनले यो कामका लागि गर्यो नेपालको खुलेर प्रशंसा
काठमाडौं, असार ९ । अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई
काठमाडौं, ९ असार । गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधिमण्डल र काठमाडौ महानगरपालिका मेयर बालेन शाहबीच भेटवार्ता
प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाको अध्यक्षमा कृष्ण लामिछाने, यी हुन पदाधिकारी र सदस्य (सूचीसहित)
बोस्टन (अमेरिका), असार ५ । प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) अमेरिकाको अध्यक्षमा कृष्ण लामिछाने सर्वसम्मत चयन
टेक्ससका लागि पर्यटनदूतमा सुवेदी नियुक्त
अमेरिका, असार ४ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले झापा अर्जुनधाराका रामकुमार सुवेदीलाई टेक्ससका
‘प्रनेम’अमेरिकाको राष्ट्रिय अधिवेशन बोस्टनमा हुँदै
अमेरिका, ३ असार । अमेरिकामा रहेका प्रवासी नेपालीहरुको संगठन ‘प्रवासी नेपाली मञ्च, अमेरिका’ को राष्ट्रिय
गैरआवासीयको नागरिकताको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकारात्मक छौं : प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं, २ असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवासीय नेपालीहरूले उठाउँदै आएको नागरिकताको मुद्दा सम्बोधन गर्न
एनआरएनए एसिया बिज्ञ सम्मेलन थाइल्याण्डमा, यस्ता छन एजेण्डा
लण्डन, जेठ २८ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एसिया क्षेत्रीय ९औँ बैठक तथा दोस्रो